I-XZ420E i-HDD yimveliso emitsha eseta itekhnoloji ephezulu, amava omsebenzisi, ukusebenza ngokukuko kolwakhiwo ngokubanzi, kwaye inika ingqalelo ngakumbi kwiimfuno zokwakha, umkhwa wokusebenza, ukonga umbane, kwaye inokusetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo lombhobho wedolophu njengombane, unxibelelwano, intambo yeTV njalo njalo.
Inkqubo yokubamba yokulawula ngesanti kubunzulu baphantsi eyodwa ibonelela ngokusebenza kokukhululeka kunye nokusebenza kohlengahlengiso kumatshini wonke. Izinto ezikumgangatho wokuqala zohlobo lwehydraulic ziyakhethwa ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okuthembekileyo kwenkqubo yonke yomatshini.
3.Isantya esiphezulu sokutyibilika kweenkqubo, ipiston motor ukufezekisa isantya esiphezulu kunye nesezantsi sokuhambisa, ukwandisa amandla okuziqhelanisa neemeko zokusebenza komatshini, ukukhuthaza ukusebenza kolwakhiwo.
4.Umatshini wonke usebenzisa itekhnoloji yokhuseleko njengokuhamba okulawulwa ngocingo ngokulinganayo, iswitshi sokuhlala, ukudibanisa izinto, ukhuselo lombane kwaye, ixesha elifutshane kunye ne-20% yamandla, ukuhlangabezana neemfuno zokuqinisekiswa kwezokhuseleko ze-CE.
5.Sliding, inkqubo ejikelezayo yemveliso ezininzi, iimodyuli ezihamba kunye nezihamba ngombane, inkqubo yokonga umbane, ukusebenza ngokukuko kolwakhiwo, ukusebenza ngokunyusa nge-15%.
6.Support iimfuno ezahlukeneyo zabathengi, umatshini unokunyuswa ngeteksi, isixhobo sokupholisa umoya, ukuqala okubandayo, ukubola ngodaka, intonga yokulayisha ngokuzenzekelayo, ukhuselo lombane lokukhusela umbane weoyile njl njl, ukunciphisa amandla okusebenza, ukuphucula ukusebenza kolwakhiwo.
Iimpawu zokwazisa ngeXZ420E HDD
Injini yase China Ⅲ yesigaba se-III e-China
Impompo yodaka engama-400L L engama-400L
Impompo yodaka ye-450L L ye-450L yodaka
Isinqandi sodaka esibandayo
Ukucoca udaka Ukucoca udaka
Semi-oluzenzekelayo umbhobho izixhobo semi-oluzenzekelayo yokuphatha
Ukulayisha ngokuzenzekelayo umbhobho opheleleyo ozenzekelayo
Ikhebhu Ishedyuli elula yomatshini wentente
I-Cab (ebandayo kwaye eshushu) I-Cab kunye ne-air conditioner
Ukuhamba ngokuLawulwa kweMigca ngokulinganayo
Ukuhamba ngokulawulwa kwentambo ngokulinganayo,
Ixesha elifutshane kunye ne-20% yamandla
Sebenzisa ngokuzenzekelayo ioyile yomsonto Umtya weoyile ozenzekelayo
Uqwalaselo lweCandelo eliphambili
ILiyuan / iHuade
XZ420E HDD umatshini uqale xa ukhatshwa luluhlu lokupakisha, kubandakanya la maxwebhu alandelayo:
ISatifikethi seMveliso / iNcwadi yeMveliso
Egqithileyo XZ400 Horizontal Directional Drig Rig
Okulandelayo: I-XZ450Plus yecala lokukhomba izixhobo ezijikelezayo
umatshini wokugrumba i-hdd, Horizontal Directional Ukubhola Rig, Umatshini wokugrumba amaqula, I-hdd rig,